आफ्नो दुर्भाग्य,सौभाग्यमा बदल्न कसो गर्नु पर्छ होला ? थाहा पाउनु होस् ! – Jagaran Nepal
आफ्नो दुर्भाग्य,सौभाग्यमा बदल्न कसो गर्नु पर्छ होला ? थाहा पाउनु होस् !
काठमाडाैँ। मानिसहरु धर्म गर्न भन्दै विभिन्न मन्दिर जाने वा घरमानै देव देवताको मुर्ति राखेर पूजा गर्ने गर्छ। विभिन्न तरिकाहरु अपनाएर वा विधिवत रुपमा पूजा आराधना गरेर भगवानलाई प्रसन्न गराउने कार्य गरिन्छ। तर शास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार धर्म गर्ने भगवानको पूजा मात्र नगरेर आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरुमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।
३.यदि मंगलबारको दिन पारेर मन्दिर गई ७ पटक हनुमान चालिस पढ्ने र ६ वटा नरिवल भगवान सामु चढाउने र प्रसाद स्वरुप सबैलाई बाँडी आफू पनि खाने गर्दा भाग्य खुल्ने र जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्न सकिने मान्यता रहेको छ।
४. आफ्नो इष्ट देवताको पूजा नियमित रुपमा गर्ने गर्नुपर्छ। यसबाट भगवानको कृपा मिल्ने र आफूले सोचेका कामहरु सजिलै पूर्ण हुने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।५. विहान छिटै उठेर सूर्य देवतालाई तामाको भाँडोको जल अर्पण गर्दा पनि तपाईका सम्पूर्ण दुख कष्ट नाश हुने र जीवन सहज रुपमा निर्वाह गर्न सकिने मान्यता रहेको छ।